I-Orlistat powder (96829-58-2) hplc≥98% Umkhiqizi nefektri
/ Imikhiqizo / I-Fat Loss powder / I-Orlistat powder
Isilinganiselwa: SKU: 96829-58-2. Isigaba: I-Fat Loss powder
I-AASraw inokukwazi ukuhlanganisa nokukhiqiza kusuka kugremu ukuya ku-oda lomkhulu we-Orlistat powder (i-96829-58-2), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-Orlistat powder yi-derivative egcwele ye-lipstatin, i-inhibitor enamandla yemvelo ye-pancreatic lipases ehlukaniswe ne-bacterium Streptomyces toxytricini. I-Orlistat yisidakamizwa esenzelwe ukwelapha ukukhuluphala. Noma kunjalo, ngenxa yokwenza okulula okuyiyo ukuzinza, i-orlistat yakhethwa ngaphezu kwe-lipstatin yentuthuko njengesidakamizwa sokulwa nokukhuluphala ngokweqile.
Izinhlamvu ze-Orlistat powder ezisemqoka
Ifomula Yamamolekhula: C29H53NO5
Isisindo Yamamolekhula: 495.7
I-Melt Point: 50 ° C
Igama lomkhiqizo: I-Orlistat
Ngaphezu kwengxenye yabantu emhlabeni bake bazama uhlelo lokulawulwa kwesisindo, njengokunciphisa umzimba, ukuzivocavoca umzimba, ukuhlinza, noma imithi. Yonke le mishanguzo yokwehlisa isisindo isebenza kuphela uma uthembekile kubo futhi ulandela imiyalo kokugcina. Kodwa-ke, ukukhetha ukuhlinzekwa noma ukwelashwa kungahle kube yingozi uma ungathathi izinyathelo zokuphepha eziningi.
Isakhiwo samakhemikhali se-Orlistat (ukuhlanganiswa kwe-3-D)
Isakhiwo samakhemikhali se-Orlistat (ukuhlanganiswa kwe-2-D)
Izakhiwo ze-Chemical ze-Orlistat
IMisa yangempela I-495.392 g / mol
Indawo ephezulu yePolological Polar I-81.7 A ^ 2
I-Count Bond Count 23
isisindo Yamamolekhula I-495.745 g / mol
Incazelo elula ye-Orlistat powder
Okukodwa kwe imithi yokulahlekelwa isisindo ukuthi uzothola ekufuneni kwakho ukuthola izidakamizwa zokuphatha isisindo esiphezulu kakhulu i-Orlistat. Kulesi sibuyekezo se-Orlistat, uzothola ulwazi olubalulekile, kufaka phakathi ukuthi luyini, ukuthi lusebenza kanjani nokuthi lufanele lusetshenziswe kanjani, ngakho-ke unganquma uma kukukhetha kahle.
I-Orlistat, eyathengiswa njengemithi yokwelashwa ngaphansi kwegama lokuhweba i-Xenical, liyisidakamizwa sokulahlekelwa kwesisindo somuthi esakhiwe ukuze siphathe izinkinga zesisindo ezinzima ezifana nokukhuluphala, kanye nezinye izimo ezihlobene nesisindo. Yenziwa i-GlaxoSmithKline njengesidakamizwa esiphezulu se-Alli kokubili e-United States nase-United Kingdom.
Ama-formulations ajwayelekile we-Orlistat atholakala emazweni amaningana. Kusukela ku-2000, ihlelwe njengemithi ye-S3 ngaphezulu kwe-counter e-Australia. Ukwamukelwa kwe-Orlistat njengesidakamizwa esingaphezu kwe-counter kwaba yinkinga e-United States. Kwakuphikisana ngokuphindaphindiwe ekusebenzeni okusebenzayo nokuphepha ngethimba lokugqugquzela abathengi elibizwa ngokuthi i-Public Citizen.
Izenzo ze-Orlistat njenge-lipase inhibitor, okusho ukuthi kuvimbela ukumuncwa kwamafutha ekudleni, ngaleyo ndlela kunciphise inani lamakhalori owathathayo. Njengeminye imithi eminingi yokulahlekelwa isisindo, I-Orlistat lenzelwe ukusetshenziswa ngokuhlanganiswa nezinye izindlela zokuphila ezifana nokuzivocavoca nokudla. Ucwaningo lwezokwelapha lubonisa ukuthi abantu abanamathele kule nhlanganisela banethuba lokulahlekelwa ngamakhilogremu amabili kuya kwamakhulu kunelawo angafaki isidakamizwa esithweni sabo sokulahlekelwa isisindo.
Esinye sezici ezifiselekayo mayelana ne-Orlistat ukuthi akusizi nje ukuthi ulahlekelwe isisindo kodwa futhi kunciphisa kahle ukucindezela kwegazi. Ukwengeza, lesi sidakamizwa sokuphathwa kwesisindo sikholwa ukuthi sivimbela ukuqala kohlobo lwe-2 yesifo sikashukela kubantu abakhuluphele ngendlela efanayo nendlela yokuphila eyenziwe ngayo.
Ngenkathi kunezinzuzo eziningana ze-Orlistat ongajabula ngazo, kukhona neminye imiphumela emibi ye-Orlistat okufanele uyinake. Umphumela ongemuhle kakhulu obikiwe waleli philisi lokwehlisa isisindo yi-steatorrhea. Lesi yisifo samathumbu esibonakala ngamafutha, indle engasebenzi. Izimpawu, ngenhlanhla, ziyancipha ngokuhamba kwesikhathi.
Indlela yokusebenza ye-Orlistat
I-Orlistat iyi-Intestinal Lipase Inhibitor enamandla. Lesi sidakamizwa iyi-inhibitor esebenzayo esetshenziswayo eguqukayo yamathumbu emathumbu emathunjini. Isidakamizwa sakha ukubopha okuhlanganayo nesiza esisebenzayo se-serine kuma-pancreatic kanye ne-gastric lipases, ngaleyo ndlela kuvimbele isenzo sabo futhi kuvimbele amanoni asuka ekudleni ukuthi angadonswa ngamanzi futhi amunceke. (NCI04).
Ngezimiso ezilula, i-Orlistat yenza kube lula ukulahlekelwa isisindo ngokunciphisa i-pancreatic ne-gastric lipases, okuyi-enzyme ebalulekile emathunjini ehlukumeza i-triglycerides. Lapho lezi lipases zivinjelwe, i-hydrolyzation ye-triglycerides kusuka ekudleni kwakho ibe yi-fatty acety acid acids.
Amaphilisi okudla athathwa ngomlomo futhi athathwa kanye; I-lipase inhibition yendawo yenzeke ngaphakathi kwepheshana le-GI. Amanani amancane kuphela omuthi adluliselwa emzimbeni, kanti iningi lezidakamizwa liqedwa ngamanzi.
Ucwaningo lwamuva luye lwathola i-Orlistat ukuba ibe namandla ekuvimbeleni i-enzyme ehilelekile ekusakazweni kwamangqamuzana omdlavuza owingozi. Noma kunjalo, imiphumela emibi engaba khona yomuthi (njengokuvimbela kwamanye amaseli angalindelekile noma ukungabi khona kwezinto ezimbi) kuphazamisa ukusetshenziswa kwayo njenge-antitumor agent ewusizo. Kwesinye isifundo, abacwaningi bathatha indlela yokwelashwa kwamakhemikhali ukuze bathole amathagethi amasha omuthi omuthi, kuhlanganise nezinhloso ezingekho.
Kumthamo ojwayelekile kadokotela we-120 mg izikhathi ezi-3 ngosuku ngaphambi kokudla, i-orlistat iphilisi lokulahlekelwa isisindo livimbela cishe amaphesenti angama-30 wamafutha okunomsoco ukuthi angangeni emzimbeni. Ukuthatha amanani angaphezulu akunikezi imiphumela enamandla kakhulu.
Ukusetshenziswa kwe -Orlistatpowder
I-Orlistat isetshenziselwa njengesidakamizwa sokuphatha isisindo. Kuyisinqumo esihle kubantu abakhuluphele kakhulu noma abakhuluphele kakhulu. Le pilisi yokulahlekelwa isisindo inconywa ukuthi isetshenziswe ngabantu abanezinkinga zezokwelapha ezihlobene nesisindo. Ithembisa ukusiza abantu hhayi nje ukulahlekelwa isisindo, kodwa futhi kusiza ukuvimbela ukuba bangabuyeli emuva isisindo abalahlekile. Ngokwenza kanjalo, kusiza ukunciphisa ingozi yegazi eliphezulu, isifo sikashukela, isifo senhliziyo, nezinye izingozi eziningi zempilo ezihlobene nokukhuluphala.
Isilinganiso sokulahlekelwa isisindo ngemuva kokuthatha i-Orlistat ihluka ukusuka komuntu oyedwa kuya kwesinye. Abacwaningi abaqhuba ukuvivinyelwa komtholampilo okwedlule unyaka bathola ukuthi phakathi kwama-35.5 namaphesenti angu-54.8 wezifundo ezikwazi ukufeza amaphesenti angu-5 ukwehla okukhulu emzimbeni, nakuba kungasiwo wonke umthamo olahlekile owawukhulu kakhulu. Mayelana ne-16.4% -24.8 yezihloko eziphumelele ukufeza okungenani amaphesenti angu-10 wehla emanzini omzimba. Lapho izihloko ziyeka ukuthatha i-Orlistat, inamba enkulu yawo yaphinde yafika ku-35 amaphesenti wesisindo abaye bakwazi ukulahlekelwa.
I-Orlistat iza ngesimo se-turquoise, hard-gelatin capsules aqukethe amaphilisi we-powder futhi anesisindo se-120-mg. Umthamo wansuku zonke onconywayo ungamaphilisi amathathu ngosuku. Akufanele uwaphuze wonke amaphilisi amathathu, kodwa esikhundleni salokho thatha ithebhulethi ngayinye ngesidlo esiyinhloko esinamafutha, okungukuthi, esisodwa sokudla kwasekuseni, esisodwa sasemini nesinye sokudla kwakusihlwa. Ungaphuza iphilisi ngalinye ngokudla noma kuze kufike ehoreni elilodwa ngemuva kokudla. Uma kwenzeka ukudla kungaphuthelwa, noma uma ukudla kwakho kungenawo amafutha, umthamo we-Orlistat ungashiywa. Imithamo engaphezu kwesilinganiso sansuku zonke esinconyiwe ayitholakalanga ukuthi inikeze noma iyiphi inzuzo eyengeziwe.
I-Orlistat iphumelela kakhulu uma ihlangene namanye amasu okulahlekelwa kwesisindo njengokunamathela ekudleni okunomsoco, okuncishisiwe-khalori nokuzivocavoca njalo. Ukwaziswa ukuthi uthathe iphilisi yokulahlekelwa isisindo ngokudla okuqukethe cishe amaphesenti angu-30 amakholori avela kumafutha. Imiphumela yomuthi ibonakala ngokushesha ngemuva kwamahora angu-24-48 ngemva kokuthatha umthamo.
I-Orlistat itholakale ukuthi iyasebenza ekunciphiseni ukumuncwa kwamavithamini athile ancibilika ngamafutha kanye ne-beta-carotene. Kanjalo, abantu abaphuza iphilisi bayelulekwa ukuba baliphuze kanye ne-multi-vitamin equkethe amavithamini ancibilikayo anamafutha ukuqinisekisa ukondleka okwanele. Kunconywa ukuthi isithasiselo sevithamini sithathwe okungenani amahora amabili ngaphambi noma ngemuva kokuthatha i-Orlistat.
Ngokuqondene nalabo abagulayo bethola ukwelashwa kwe-cyclosporine, bayelulekwa ukuba benze i-cyclosporine okungenani amahora angu-3 ngemuva kokuthatha i-Orlistat. Kulabo abathola ukwelashwa kwe-levothyroxine, bakhuthazwa ukuba baphathe ukwelashwa kwe-levothyroxine okungenani amahora angu-4 ngemuva kokuthatha i-Orlistat. Labo abasebenzisa kokubili i-Orlistat ne-levothyroxine kufanele baqaphelwe ngokucophelela ngenxa yezinguquko emsebenzini we -roid.
Ngaphambilini, i-orlistat yayithathwe ngokungaphansi kwemithi kadokotela noma wemithi. Kodwa-ke, ku-2007, i-US Yokudla Nezidakamizwa Zokulawulwa Kwezidakamizwa yawugunyaza emakethe engaphezu kwe-counter, ngakho-ke, okwenza itholakale wonke umuntu.
Hlola noma yikuphi ukusabela okweqile
Ngaphambi kokuthatha lesi sidakamizwa, kuphakanyiswa ukuba ukhulume nodokotela wakho nganoma yikuphi ukuphendula kwe-hypersensitivity ongayithola. I-Orlistat iqukethe izithako ezingasebenzi, ezingase zingathandeki kuwe, okuholela ekusebenzeni okukhulu kwe-allergen kanye nemiphumela emibi. Ezinye zazo zihlanganisa i-cellulose, i-microcrystalline, i-gelatin, i-silica, ne-sodium isitashi ye-glycolate.
Cabanga ngomlando wakho wezokwelapha
Udinga ukwabelana nekhemisi noma udokotela wakho mayelana nanoma yiziphi izimo zezokwelapha ongase ube nazo. Lokhu kungenxa yokuthi i-orlistat iphikisana nezinkinga ezithile nezinkinga, ikakhulukazi lezo ezihambisana nokugaya.
Uma uhlangabezana nanoma yiziphi izimo ezingezansi, kuphakanyiswa ukuba ufune ulwazi oluthe xaxa kusuka kochwepheshe.
Lokhu kungavamile ukuthi kunomthwalo wokungenwa okwanele kwezakhi zokudla eceleni kwesistimu ye-GIT. Kufanele uqaphele ukuthi i-orlistat ngokwayo isebenza ngokuvimbela ukugaya kwamafutha. Ngakho-ke, lokhu kuzophela kube yingozi kakhulu kunoma ngubani othatha lesi sidakamizwa, kodwa bahlupheka nge-malabsorption syndrome.
Isifo senhliziyo noma i-cholestasis
Lesi yisimo lapho kukhona ukuvinjelwa kokugeleza kwe-bile kuya esibindi. Kunemibiko eminingana exhumanisa i-orlistat nokulimala kwesibindi okunamandla, noma kwenzeka ezimweni ezingavamile noma ngaphansi komthamo omkhulu.
Lokhu kufaka phakathi i-cholecystectomy ne-syndromes ehambisanayo.
Ezinye izimo zezempilo okufanele ukhulume kumakhemikhali wakho zibandakanya ukutheleleka ngegciwane lesandulela ngculazi, isifo se-thyroid, amatshe ezinso, ukuwayeka noma ukuphazamiseka kwamagciwane. Lapho behlukunyezwa noma bexhumene, i-orlistat ingaqeda ukungalingani ukwelashwa kwe-antiepileptic ngokuphazamisa ukungena.
Ezinye zalezi zinkinga ziyi-bulimia ne-anorexia. Futhi, asikho isidingo sokuthatha i-orlistat uma ungapheli ngokweqile.
Kuwukuhlakanipha ukwazisa udokotela wakho uma ukwiminye imithi ikakhulukazi leyo engacindezela amasosha omzimba. Ukusebenzisana kwezidakamizwa kuzophazamisa i-pharmacokinetics, okuholele ekwandeni noma ekwehleni komphumela kunoma iyiphi yazo. Isibonelo, i-orlistat izohlala iphazamisa inqubo yezidakamizwa ezinqunyelwe ukufakelwa komzimba.
Uma u-cyclosporine, udokotela wakho cishe uzokutshela ukuthi ugweme i-orlistat. Noma kunjalo, usengakwazi ukuyilawula kuphela ngemilayezo eqinile. Ukuze ube ohlangothini oluphephile, kufanele uthathe okungenani amahora amabili ngaphambi kwalesi sidakamizwa sokuphatha isisindo noma amahora amabili kamuva.
Ukwengeza, kufanele ukhulume yonke imithi kadokotela kanye nemithi engavumelekile, izithako zokudla, amavithamini, ama-anticoagulants, noma imikhiqizo yemithi ongase uyithathe.
Abesifazane abakhulelwe nabancelisayo
Le mithi yokuphatha isisindo akuyona yabomama abalindele, noma ubani ohlela ukukhulelwa, noma ukuncelisa ingane. Isidakamizwa akunakwenzeka ukuthi sibe nomthelela wokulahlekelwa isisindo futhi kuzophela ukulimaza ingane.
Nakuba kungakacaci ukuthi i-orlistat idlulela esifubeni sikamama, kungcono ukuyigweme futhi uzizwe uphephile, kunokudabuka.
I-Orlistat yilokho umuntu onesifo sikashukela angadinga ukuthuthukisa nokulawula ushukela wegazi nokuthuthukisa ukubekezelelana kwe-glucose. Noma kunjalo, kuzodingeka uqaphele amazinga kashukela njalo futhi uvakashele udokotela njalo. Ukwenza kanjalo kukusiza ukuba wazi ukuthi kufanele ulungise yini imishanguzo yesifo sikashukela, ukudla okulungile, kanye nohlelo lokuzivocavoca okufanele uthathe.
Njengezokwelapha eziningi, i-orlistat inezimo zayo ezimbi. Umthelela ohlangothini oluyinhloko uhlale ubhekwa emisebenzini yemilenze. Noma kunjalo, lokhu kungabonakala kuphela phakathi kwamasonto ambalwa okuqala ngokuthatha isidakamizwa sokulahlekelwa isisindo.
Kwabanye abantu, izimpawu zingase zishintshe ngesikhathi abanye; ingase iqhubeke phakathi kokuthatha i-orlistat. Ngalesi sikhathi, kuwukuhlakanipha ukutshela udokotela wakho. Uma uvumelanisa ngokwengeziwe ukudla okunamafutha aphansi, cishe kunemiphumela emibi ukunciphisa.
Nanka eminye imiphumela ejwayelekile;
Yize kungenabungozi, i-steatorrhea yikutholakala kwamafutha namafutha angaphezu kwesisindo. Njengoba i-orlistat ivimbela i-lipases, ngeke kube khona ukuxakwa kwamafutha e-acids mahhala. Ngenxa yalokho, udoti luzovela oily futhi bulky.
Ukuze ulawule le mphumela, umuntu kufanele agweme ukudla okunezikhalori namazinga aphezulu e-fat. Ngokwezilinganiso ze-FDA, inani kufanele libe ngaphakathi kwe-0.53 ounces futhi lingadluli i-30%.
Ezimweni eziningi, igesi iphuma ngokuphuma kwamagesi. Kuzodingeka uhlole izembatho zakho noma izingubo zangaphansi zokuthola indawo ye-oily spotting.
Eziphuthumayo, eziphuthumayo, kanye nokunyakaza kwezibilini njalo
Ukukhathazeka nobuhlungu besisu
Amazinga kashukela ephansi aphansi
Lokhu kuvamile phakathi kwabantu abanesifo sikashukela sohlobo II.
Ukulimala okukhulu kwesibindi
Izimo ezinjalo azivamile kepha zingavela uma unezinkinga ezithile zesibindi, noma uthatha isilinganiso esikhulu. Ku-2010, i-FDA ifake isexwayiso sokuphepha kumalebula e-orlistat, akhombisa ubungozi bokulimala kwesibindi.
Kodwa-ke, lo mphumela oseceleni useyimpikiswano uma kubhekwa ukuthi olunye ucwaningo lwamacala olushicilelwe kwiBritish Medical Journal lukhombise okunye.
Ezinye zezibonakaliso eziyisixwayiso zesifo sesibindi zihlanganisa ukuhlanza, ubuhlungu besisu, isikhumba esiphuzi, nomchamo omnyama.
Kuyinto engavamile ukubhekana nanoma iyiphi i-hypersensitivity noma impendulo ye-allergen lapho uthatha i-orlistat isisindo sokulahlekelwa isisindo. Kwabanye abantu, izithako ezingasebenzi ezingatholakali isisindo sokuqhwaga, ukuchiza, ukuqhuma, ukuvuvukala komzimba, ukuphefumula kanzima, noma isizungu.
Eminye imiphumela emibi engafani kakhulu ifaka ukukhathazeka, ikhanda, ukuvuvukala, ukungakhululeki okuphathelene nokukhathala, ukukhathala, ukuthambeka okuphansi, kanye namagall. Uma uhlangabezana nezimpawu ezinzima, kufanele wazise udokotela wakho ngokushesha noma ubike uHlelo Lokubika lwe-FDA.
Isinqumo sokugcina ku-Orlistat powder
Nakuba i-orlistat inemiphumela emibi embalwa, kuyindlela yokwelapha isisindo esihle kakhulu esizoletha imiphumela kungakapheli amasonto amabili. Imfihlo yokuzuza kulo muthi ilandela imiyalelo, ukuqonda izinyathelo zokuqapha, nokuhlola ekudleni kwakho.
Njengoba uthatha i-orlistat, kubalulekile ukulandela uhlelo lokudla okunempilo, kudla amanoni angaphansi, ama-calorie aphansi, nokuzivocavoca njalo. Ukudla okufanele kufanele kuhlanganise izithelo, imifino kanye nezinhlamvu eziningi. Ukwengeza, kufanele uhlanganise nokudla kwakho nemikhiqizo ye-multivitamin ebalulekile kusukela i-orlistat ivimbela ukumunwa kwamavithamini amaningi anamafutha.
Uma ungabaza, ungaxhumana nomuthi wemithi noma udokotela ukuze uthole imiyalelo eyengeziwe. Ngaphandle kwalokho, ungaxhumana ne-US Food and Drug Administration nganoma yikuphi ukubuza noma ukubika imiphumela engozini yokuphila, engabhalwanga.
Indlela yokuthenga I-Orlistat powder (96829-58-2) kusuka ku-AASraw